HTC hapụrụ ọtụtụ ihe a ga-achọ na MWC 2015 | Akụkọ akụrụngwa
HTC, gini ka imere?
Ọ bụ Luis del Barco | | Ngwa
Ọ dịla otu izu kemgbe mmemme HTC mere na Nzukọ World Congress nke Barcelona, nke ọ fọrọ nke nta ka m kwaa ákwá. Anyi agaghi arapu onwe anyi: olile anya anyi nwere tupu ihe omume a adighi oke. Ngwaahịa kachasị achọ ụlọ ọrụ maka ihe ngosi a bụ HTC One M9, ụdị ya dị elu nke ga-anọchi M8 dị ugbu a na nke amaraworị ihe niile, n'ihi nchapu anyị hụrụ na ụbọchị ndị gara aga.
Ya mere, anyi enweghi olile anya di elu maka ogbako a, ma obu anyi ekwere na o gabu ihe omume nke odi nkpa puru iche n’ime onodu MWC. O di nwute, obu. N’ime ọkara awa nke ngosi ahụ were, ndị Taiwanese gosipụtara atọ ọhụrụ ngwaahịa, ma mmetụta ha hapụrụ bụ ịhụ ka ihe omume rụrụ arụ na-eme. Ka anyi gaa nfe.
2 HTC adịgide
3 HTC Live
Dịka m kwuru, n'oge ihe omume ahụ nwere mmasị na ngwaahịa a pere mpe. Agbakwunyere ọhụụ ọhụụ na ụbọchị ndị gara aga n'ụtụtụ ahụ, na-ahapụ ihe ịchọ mma HTC na obere akwa. N'otu oge na ngosi ahụ, anyị nwere ike ikwenye nke ọ bụla n'ime asịrị ahụ. Ọhụrụ HTC One na-agbaso usoro na-aga n'ihu na-enweghị mmasị na anyị. Ihe ohuru bu ihe anahuta site na enweghi ya na naanị mgbanwe ndị anyị hụrụla n'ọkwa mara mma abụwo na nsogbu dị ka igwefoto, oke ọkpụrụkpụ nke ngwaọrụ ma ọ bụ agba ya (nwere agba agba ọhụrụ bubblegum na-atụghị anya na ihe atụ nwere njirimara ndị a).
N’enweghi nghọta, HTC ekpebiela ijide otu n’ime njirimara njirimara kachasị ama na oge kacha nzuzu mgbe ị na-ekwu maka otu esi eji ya eme ihe: acronym nke ụlọ ọrụ dị n’iru. Nke a mepụtara mpaghara "nwụrụ anwụ" n'etiti ihuenyo na ahụ nke ngwaọrụ ahụ na-abaghị uru na enweghị uru ọ bụla. Otu n’ime ihe ọhụụ ole na ole emere ka anyị mata mmemme a bụ igwefoto, nke a gwara anyị na emegogo nke ọma. Ihe a niile na akwụkwọ, n'ihi na ule ahụ na-ekwu n'ụzọ ọzọ, na-ekwu na igwefoto nke HTC a ezughi oke maka ihe a na-atụ anya na ngwaahịa nke njirimara ndị a. Ọbụna nke a na-enweghị ike ịkọwa bụ na, yana adịghị ike niile o nwere, ọnụahịa ya bụ 749 euro.
Na-eju anya! Nke a anyị atụghị anya ya. O doro anya na ndị nrụpụta nwere ike ịhụ ihe n'ahịa maka ịkọwa ọla aka ndị ọzọ anyị bụ ụmụ mmadụ na-anaghị enwe ekele maka ya: gịnị kpatara mgbaaka na ọ bụghị smartwatch? Ee, HTC Grip bụ a smartband, mere na mmekota na n'okpuru Armour, nke ga - enyere anyị aka nyochaa mmega ahụ anyị, gụnyere GPS. Eziokwu bụ na imewe ahụ dịtụ echetara anyị ihe Ọnụ ego nke Fuelband SE, Nike mgbaaka, ọ bụ ezie na nhọrọ gị ka ukwuu.
N'ezie, echiche a adịghị njọ: mgbaaka maka ndị chọrọ ịdebe mmega ahụ ha. Agbanyeghị, ike mgbaaka a, GPS, nwekwara ike bụrụ ihe kachasị njọ. Ma obu ya bu na, dika anyi matara, ọchịchị obodo ga-anọ n'etiti awa anọ na ise na nke a rụọ ọrụ, nke na-eme ka mgbaaka ahụ dị ukwuu. Isi àgwà nke a wearable Ọ ghaghị ịbụ nnwere onwe ya, ebe ọ bụ na ụdị ya na-egosi na e mere ya ka ọ gaa ebe ọ bụla ị na-aga. Na mgbakwunye, ọ nwere ike ịdị oke ọnụ tụlee nhọrọ ndị ọzọ dị n'ahịa ($ 199).
Dị ka ihe gbasara mmekorita, nke a bụ ngwaahịa ọzọ emere na ụlọ ọrụ ọzọ. Oge a ka ọ dịla valvụ (onye nwe Steam) na-ahụ maka iso ya na HTC rụkọọ ọrụ iji chee anyị ngwaahịa ọhụrụ nke na - emepekwa ọhụụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ: iko mebere eziokwu. Eziokwu bu na ha abughi ndi mbu, ha agaghi abu ndi ikpe azu, isonye na nmeghari uzo nke oma, ahia di obere, nwere otutu ohere ma site na ya ihe egwuregwu vidio ga eme elu-igwe.
HTC Vive na-anọchite nnukwu usoro ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ ahụ, mana maka ụlọ ọrụ dum n'ozuzu ya, ebe ọ bụ na ị ga-ebili Oculus Rift (ma eleghị anya ọ ga-eme), nke ga - eduga n'ọganihu dị mkpa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na mpaghara ahụ. Akụkụ dị njọ bụ na ọ bụ ngwaahịa ka emechabeghị, nke ga-adị n'ime afọ niile maka ndị mmepe mana anyị amaghị mgbe ma ọ bụ etu ọ ga-esi rute ndị ọrụ.
Na ngosipụta ahụ abụghị ihe a ga-ede n'ụlọ, anyị anaghị echegbu onwe anyị. Ihe n'ezie na-eme ka anyị tụgharịa uche bụ na ọ bụ HTC n'onwe ya na-anaghị enwu gbaa n'oge ọ bụla. Ihe omuma ohuru nke di na ama ama, mgbaaka nke enweghi ikike na iko ndi emechaghi. Nke a bụ otú ụlọ ọrụ Taiwanese si amalite afọ. Ka ị ghara ịkwa ákwá.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » HTC, gini ka imere?
uTorrent na EpicScale malware ohuru, otu esi ewepu ya